Orinasa sy mpanamboatra China Uncoiler | TUBO
Un-Coiler no fitaovana ilaina amin'ny sehatry ny fidirana amin'ny tsipika fanodinana fantsona. Ampiasaina indrindra hihazonana kofehy vy hamelana coil. Manome akora fototra ho an'ny tsipika famokarana.
1. Mandresy indroa Uncoiler
Mandrelita roa hanomanana coil roa, mihodina mandeha ho azy, manitatra / mihena / manapotehana amin'ny fampiasana fitaovana voafehy pneumatic, miaraka amin'ny roller press sy ny sandan'ny sisiny mba hisorohana ny famahana ny coil ary mihodina.
2.Miorina Mandrel Uncoiler
Mandrel tokana mba hampidirana coil mavesatra kokoa, manitatra / mihena ny hydraulic, miaraka amin'ny roller press mba hisorohana ny famahana ny coil, miaraka amina fiara coil hanampiana ny famoahana coil.
3. Double Cone Uncoiler amin'ny alàlan'ny hydraulic
Ho an'ny coil mavesatra misy sakany lehibe sy savaivony, koneza avo roa heny, miaraka amin'ny fiara coil, fanamafisana ary fanamafisana ny coil automatique.
Previous: Shear sy Welder
Manaraka: Fomba fananganana FFX